मिर्मिरेको १००% हकप्रद आउंदै, कहिले हुँदैछ बुक क्लोज ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » मिर्मिरेको १००% हकप्रद आउंदै, कहिले हुँदैछ बुक क्लोज ?
काठमाडौं - मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले १००% हकप्रद बिक्री गर्न भएको छ । हकप्रद निष्कासन गर्न जेठ १८ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । जेठ १७ गतेसम्म कायम सेयरधानीले मात्र हकप्रदमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले १ः१ अनुपातमा ४ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । हकप्रद निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डले अनुमति पनि दिइसकेको छ ।
यो हकप्रदमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनआइबीएल एस क्यापिटलले गर्नेछ । यता, मिर्मिरेले जेठ २५ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभामा ३०.८०% बोनस दिने प्रस्ताव छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म यसले २ करोड १२ लाख १४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ ।